China ịgbado ọkụ igwe, DC ịgbado ọkụ igwe, AC ịgbado ọkụ igwe, ịgbado ọkụ nkpuchi, ịgbado ọkụ ngwa ụlọ ọrụ na-emepụta | Boda
Ebumnuche nke igwe ịgbado ọkụ eletriki bụ iji kpokọta solder na ihe a ga-agbanye site na iji arc dị elu nke na-ewepụta site na ngwa ngwa dị mkpirikpi n'etiti mkpirisi dị mma na nke na-adịghị mma, ka ijikọta ihe akpọtụrụ.
Ọdịdị ya dị nnọọ mfe, ọ bụ nnukwu onye na-agbanwe ọkụ. Eldgbado ọkụ igwe nwere ike kere abụọ dị ka ụdị nke mmepụta ike, otu bụ AC ike ọkọnọ, ndị ọzọ bụ DC ike ọkọnọ. Ha na-eji ụkpụrụ nke inductance, inductance ga-ewepụta nnukwu mgbanwe volta mgbe ha na-agbanye ma gbanyụọ ya, ma jiri arc dị elu nke a na-ewepụta site na obere mkpụmkpụ dị n'etiti mkpirisi na nke na-adịghị mma iji gbazee solder na electrode, ka ha wee nweta nzube nke nkwekọrịta atomic.
A na-ejikarị igwe eletrik eletrik. Eldgbado ọkụ igwe bụ oké mkpa ngwá ọrụ maka nnukwu shipbuilding ụlọ ọrụ, ulo oru na Ngwuputa ụlọ ọrụ na dị iche iche na-ewu ụlọ ọrụ. Electric ịgbado ọkụ igwe na-eji maka ihe ịgbado ọkụ, na ọ na-eletriki na ojiji.
Karịsịa, ụfọdụ obere ụlọ ọrụ na-azụta igwe ọrụ ịgbado ọkụ eletriki iji chekwaa ego. Ọ dị mfe ime ka ọkụ eletrik, ọkụ na ịda mba mgbe ejiri ya na gburugburu ebe obibi siri ike, nke ga-etinye nchekwa onwe onye na nchekwa akụ. N'ihi àgwà ịgbado ọkụ na-adịghị mma, ọ ga-ekwe omume ịkwatu ọrụ ụlọ ahụ.
Uru nke igwe ịgbado ọkụ DC: nke kachasị mkpa bụ na arc ahụ adịtụghị mma n'oge ịgbado ọkụ DC, n'ihi na nke ugbu a abụghị isi efu, ọ nwere ike ijigide arc combustion n'okpuru obere obere ugbu a, yana isi nwere ike itinye ụdị mkpado ịgbado ọkụ niile; ịgbado ọkụ na-agbanye ọkụ buru ibu, n'otu oge ahụ, ọ na-azọpụta ike. Advantkọ ihe ụfọdụ nke DC ịgbado ọkụ igwe: DC dị mfe iji arc arc, nke ugbu a enweghị ike buru oke ibu.
The uru nke AC ịgbado ọkụ bụ: apụ, ọ dịghị mfe ele mmadụ anya n'ihu arc; nke abuo, n'ozuzu circuit nke AC ịgbado ọkụ igwe dị mfe na odida ọnụego dịtụ ala; ọghọm nke AC ịgbado ọkụ igwe dị ka ndị a: n'ozuzu, ọ bụ nnukwu na nnukwu; n'otu oge ahụ, ike ike nke onye na-agbanwe ọkụ buru ibu ma oriri ike dị njọ, na ntinye ntinye otu na-emetụta ike grid.
BOSENDA na-enye usoro nke igwe eji ekpo ọkụ site na ịgbado ọkụ DC na ịgbado ọkụ AC.Mgbado ọkụ ọkụ nwekwara ike ịhazi, anyị nwere ike ịme ma OEM na ODM. Maka ozi zuru ezu, nweere onwe gị ịjụ anyị.
Nke gara aga: Ọdụdọ teepu, combustion na-akwado teepu, ịkwanyere teepu, mkpuchi teepu
Osote: Rainkwanyere mmiri ozuzo prrof ákwà, Pee mmiri ozuzo ákwà ákwà, ụgbọala mkpuchi
Ọrụ ịgbado ọkụ Machine
DC ịgbado ọkụ Machine
Magnetik ịghasa bit, sikruuokwomoto bit, isi ịghasa ...
Woodworking hụrụ agụba, aluminum hụrụ agụba, carb ...